Sawiro Mucaskarka Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Dufcad Cusub Ay Ka Qalin Jabisay. – Bogga Calamada.com
Imaarada Islaamiga Afghanistan oo hardan iyo dagaal culus kula jirta Gaalada iyo daba dhilifyadooda duulaanada ku qaaday dhulalka Islaamka ee caalamka ayaa hadane Imaaradu waxey waqti walbo juhdi xoogan ku bixisaa sidii loo sii xoojin lahaa dagaalka Jihaadka.
Dalka Afghanistan oo ah dhulka hooyada Jihaadka Casrigan waxey Imaarada Islaamiga ka hirgalisay Mucaskaraad lagu tababaro dadka cusub ee soo buuxinaya Sufuufta Mujaahidiinta,iyadoona Mucaskaraatkaasi si is daba joog ah ay uga soo baxaan iyagoo dhameystay Tababrka dhanka Caskariga Boqalaal ruux oo Mujaahidiin ah.
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa Mucaskarka Wilaayada Faryab ee Waqooyga Afghanistan soo dhameystay oo ka qalin jabiyay Dufcad cusub oo Mujaahidiin ah waxeyna Imaarada soo bandhigtay Sawirada ciidamada Mujaahidiinta ee ka qalin jabiyay Mucaskarkaasi oo dhoola tus ciidan sameynayo kuwaasi oo aad u labisan kuna hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan.
Dowlada Saliibiyadda Mareykanka oo hormuud u ah duulaanka ka dhanka ah diinta Islaamka iyo dadka Muslimiinta ayaa si toos ah ugu jabtay duulaankii ay ku qaaday Afghanistan,dhiig bax xoogan ayaana wali ku socda ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalkaasi.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirada Dufcadda Cusub Ee Qalin Jabisay.